Maxaa iska badelay Eden Hazard kal ciyaareedkan?…( Frank Lampard ayaa kaaga jawaabaya) – Gool FM
Maxaa iska badelay Eden Hazard kal ciyaareedkan?…( Frank Lampard ayaa kaaga jawaabaya)
Byare April 9, 2017
(London) 09 Abriil 2017. Eden Hazard ayaa sida muuqata wacdaro wayn ka dhigaya Premier League kal ciyaareedkan iyadoo ay wax badan iska badaleen qaab ciyaareedkiisa ee xilli ciyaareedkii tagay.
Haddaba sida uu sheeganayo rugcadaagii hore ee Chelsea Frank Lampard in isbadelkaasi ay ugu wacan tahay inuu Hazard iminka garowsaday ama uu gartay inuusan u baahnayn inuu u gooyo qof uu kol hore u soo gooyay ama inuu qof labo jeer u gooyo.
Xiddiga reer Belgium ayaa ku guuleystay abaal marinta laacibka ugu fiican Premier League kal ciyaareedkii 2014-15 kolkaa oo Blues loo caleemo saaray horyaalka.
Balse kal ciyaareedkii xigay ayay Chelsea iyo Hazard-ba galeen sanad liita oo aad u xanuun badan.
Yeelkeede, Hazard ayaa xagaagan dib ula soo baxay seeftiisa, laacibka ugu goolasha badan Chelsea ayaana aaminsan inay Hazard iminka ka muuqato baaluqnimo cusub isla markaana uu sii noqonayo mid aad wax ku ool u leh isagoo iska daayay goosmadii bilaashka ahayd.
“Aniga ahaan, waxaa jira baaluqnimo cusub oo ku aadan isaga, ma ahan oo kaliya garoonka laakiin sidoo kale garoonka bannaankiisa, wuxuu sameynayaa wareysiyo badan, wuxuu ku hadlayaa Ingiriiska, waxyaabahaasna waa muhiim marka aad noqoto ciyaaryahan heerkiisa oo kale ah.”. Lampard ayaa sidaa u sheegay Goals.
“Waxaan u maleynayaa sanadkii la soo dhaafay waxaa jiray marar markaa uu Hazard aad ugu kalsoonaa awoodiisa oo keentay inuu labo jeer qof ugu gooyo qadka dhexe, wuu u goynayaa misane markale ayuu u goynayaa.
“Iminka waxaa jira toosnaan rasmi ah oo ciyaartiisa. Aad ayuu u hufan yahay wuxuuna helayaa boosaska bannaan si uu goolal u dhaliyo.”.
23 laacib oo da'yar ah oo loogu yeerey tababar loogu diyaarinayo xulka Talyaaniga
HORDHAC: Crystal Palace Vs. Arsenal